Mon, May 25, 2020 at 12:34am
जुम्लामा २४ करोडको स्याउ उत्पादन, व्यापारी बगैँचामा नै पुग्न थाले
सुर्खेत, ११ भदौ चालू आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा जुम्लामा रु २४ करोडको स्याउ उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । स्याउ रोपिएको क्षेत्र, उत्पादन परिमाण र बजार मूल्यको अनुमानबाट सो परिमाण्मा स्याउ उत्पादन भएको प्रक्षेपण गरिएको हो । यस वर्ष जुम्लामा ६ हजार मेट्रिक टनसम्म स्याउ उत्पादन भएकोे जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत बालकराम देवकोटाले जानकारी दिए । तीन हजार ४०० हेक्टरमा..
राज्यकोषबाट सरकार प्रमुखहरुको खर्च : तलब भत्ता र विदेश भ्रमणमै २० करोड बढी झ्वाम
काठमाडौं, ११ भदौ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूको सुविधामा राज्यकोषको २० करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूका सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता र घुमघाममा मात्र एक वर्षमा राज्यकोषको २० करोड २२ लाख रुपैयाँ सकिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार विगतका जम्बो सरकारका कारण सुविधामा राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्च भएको दाबी प्रधानमन्त्री..
डुङ्गा पल्टिएर बेपत्ता भएका परिवारलाई जनही १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग
काठमाडौँ, १० भदौ प्रतिनिधसभाको आइतबारको विशेष बैठकमा राजपाका अनिलकुमार झाले लालबकैया नदीमा डुङ्गा पल्टिएर बेपत्ता भएका परिवारलाई जनही रु १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । रौतहट जिल्लामा पर्ने सो नदीमा शनिबार डुङ्गा पल्टिँदा ३५ जना डुबेका थिए । तीमध्ये तीन जना बेपत्ता छन् । लालबकैयामा अझैसम्म पुल निर्माण हुनसकेको छैन । सो शिलान्यास २०७० सालमा भइसकेको छ । त्यसैगरी..
बन्नेभो सुबिधा सम्पन्न ‘इलाम सिटी मार्ट’, ९ करोड ३८ लाखको लागत
इलाम, ९ भदौ : जिल्ला सदरमुकाम इलाममा सुविधा सम्पन्न ‘इलाम सिटी मार्ट’ निर्माण हुने भएको छ । बजारको मुख्य चोकसँगै रहेको भीमसेनस्थान मन्दिर अगाडि सो भवन निर्माण हुने भएको हो । इलाम नगरपालिका र नेपाल सरकारको रु नौँ करोड ३८ लाखको लागतमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भवनमा ९२ सटर, दुई लिफ्ट र चौथो तलामा स्टिलको..
कर वृद्धिबारे जताततै करकर ! “बुझाउन नसक्दा नकारात्मक धारणा उत्पन्न भयो”
नेपालगञ्ज, ८ भदौ बाँकेका स्थानीय तहले केही व्यवसायमा व्यवस्था गरेको करको दरबारे यहाँ टिप्पणी गरिँदै आएको छ । नेपाल महिला सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नारायणी रुपाखेती कर बढाउनुका कारण, कर तिरेपछि नागरिकलाई हुने फाइदा तथा करबाट गाउँठाउँको विकास हुने कुरालाई बुझाउन नसक्दा यसप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न भएको बताए । “कर वृद्धि गर्नु नराम्रो होइन । तर कति वृद्धि गर्ने, कुनकुन शीर्षकमा वृद्धि गर्नेलगायत..
Results 1658: You are at page 39 of 56